ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှု၏ဤအမျိုးအစား, သကြားကွေးအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမကြာခဏကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်ဆီးချိုရောဂါတစ်ဦးဓာတ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဂလူးကို့စ၏အမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ဤအမျိုးအစားပြည်နယ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပြီး, တစ်ချိန်တည်းမှာသည် Periodic တိုးမှတ်ချက်ချတစ်ဦးဆီးစမ်းသပ်မှုကောက်ယူရှိရာကိစ္စများတွင်ခန့်အပ်ထားသောခံရကြလိမ့်မည်သေချာပါစေ သွေးဖိအား၌တည်၏။
ထို့အပွငျ, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ယူ. ဆီးချိုရောဂါတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုရှိသည်သောအမြိုးသမီးမြားသငျ့သညျ။
ဤလေ့လာမှု၏အကူအညီနှင့်အတူ, ဆရာဝန်များတစ်ဦးဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဇီဝြဖစ်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ status ကို set နဲ့သူ့အသေးအဖှဲ infractions ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သကြားကွေး၏ညွှန်းကိန်းမှပုံပျက်ရသေးသည်လက်နက်ချရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံးမုန့်ညက်မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင် 12 နာရီထက်ဖြစ်ရပါမည်။
ပထမဦးစွာအနေနဲ့ချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်အမျိုးသမီးတွေသွေးဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်၏တိုင်းတာခြင်း။ ထို့နောက်သူမခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ 1.75 g / ကီလိုဂရမ်နှုန်းမှာပုံမှန်သကြားကိုယူပြီးသော၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့, သောက်သကြားရည်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့်မပေး '75 ထက်ပို
သွေးထဲမှာဂလူးကို့စ၏ဒုတိယနှင့်တတိယတိုင်းတာအဆင့်ဆင့်အသီးသီး, 1 နှင့်2ဇအပြီးထွက်ယူသွားတတ်၏။
အစာရှောင်ခြင်းဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့် သာ. ကြီးမြတ် 5.3 mg / dL;
ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်တစ်နာရီအကြာတွင်ထက်ပိုမို 10 mmol / l;
ကိန်းဂဏန်းဂလူးကို့စအဆင့်2နာရီ - ထက်ပိုမို 8.6 mmol / l ။
ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လေ့လာမှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ကျော်လွန်လျှင် အထက်, ထိုမိန်းမသည် retested တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုမြောက်မြားစွာအချက်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းသကြား၏ပထမဆုံးကွေးပြီးနောက်ရောဂါ, ရလဒ်မဟုတ်ရင်တောင် သာမန်, ထားဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အိပ်ရာကြွင်းသောအရာမှစွပ်စွဲသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကို malabsorption ဖြစ်နိုင်သည်သောအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း၏ရောဂါဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်သောအခါထိုသို့ဥပမာ, သွေးဂလူးကို့စအဆင့်ရှိသူများကိစ္စများတွင်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်, ကိုယ်ဝန်အတွက်ရောဂါ "ဆီးချိုရောဂါ" အောင်သကြားကွေးများအတွက်စမ်းသပ်အသုံးပြုနှင့်၎င်း၏ရလဒ်များကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်စံချိန်စံညွှန်းများ, နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။ ရန်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Diuretics ဆီး
က multiparous အတွက်ပို့ဆောင်မှုမပြုမီအစာအိမ်လျှော့ချလိုက်တဲ့အခါ?
ကိုယ်ဝန်အတွက် Ureaplasma - သည်သူငယ်အတွက်အကျိုးဆက်များ
လေဒီဂါဂါကြည့်-ရောနှောရုရှား "Thrones ၏ဂိမ်း" ၏ရာသီသစ်အတွက်ကစားပါလိမ့်မယ်
သူမ၏စေ့စပ်အတူတက်ခြိုးဖောကျပွီးနောကျဗြာ Kylie Minogue: "! ဒီဖြစ်ပျက်ကြမဖြစ်သင့်"
Brad Pitt ဟာဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက်စွန့်ပစ်, သူ့အဖွားသွားရောက်ရပ်တန့်
အဖြူရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အဘယ်အရာကိုဆောင်းတွင်းအတွက်ကလပ်မှ Wear သလော
အစိမ်းရောင် Slim ကော်ဖီ: ဓါတ်ပုံများ
ကက်သရင်း Heigl တစ်ဦးရေကူးဝတ်စုံနဲ့၌သူ၏မက္ကဆီကိုမိသားစုနှင့်ရှယ်ယာဓာတ်ပုံများနှင့်အတူအနားယူနေသည်
ဖက်ရှင် knitwear 2014